English Myanmar Mobile Dictionary - အရူးလေး ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
TextoaHTML / HTMLaTexto
နတ်သားလေး သည် ဘာမျှ မသိပါ ၊ ဘာမျှလဲ မတတ်ပါ ၊နာမည်ကျော်ကြား Copy Blogs များကို မိမိ တင်ချင်သလို တင်သောဘလော့ဖြစ်သည် ။ သင့်အတွက် အသုံးဝင်သောအရာတွေ့ ရှိပါက ခွင့်တောင်းစရာမလိုပဲ လွတ်လပ်စွာရယူပါ ။
ဒီဘလော့ကို Admin ကိုဝေမင်းလျှန်နဲ့ အတူ တွဲ ဖွင့်ထားတာပါ ။ ကျနော့် နတ်သားလေး Sexy Blogs နှင့် ကိုဝေမင်းလျှန် နှင့်လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါဘူး ။
English Myanmar Mobile Dictionary
Ornagai ဆိုတာက English Myanmar Dictionary တစ်ခုပါ ၊၊ Mobile Dictionary တစ်ခုပေါ့ဗျာ ၊၊
ဒီမှာသွားပြီး စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းပြီး ဖုန်းမန်မို ရီ ထဲထည့်ပေးပါ ၊၊
http://www.saturngod.net/iphone-zawgyi ကြိုက်ရင် သွားယူပါ ၊၊
+ မှတ်ချက် + 1 မှတ်ချက်
31 May 2012 at 13:07
လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်နိုင်သည် (နတ်သားလေး)သည်ဘာမျှသိတတ်နားလည်ခြင်းမရှိ
သောကြောင့်အကူညီ တောင်းခံမူ့ များကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည် မဟုတ်ပါ ။
Anti Virus Cleaner software Flash Song သီချင်းများ hacker ဆိုင်ရာ mobile Myanmar Dictionary root TextoaHTML / HTMLaTexto ကုဒ်များ ဂျီတော့၊ဂျီမေးလ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ နည်းပညာ၊ကော်ပီ ဖုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖောင့် အထွေထွေ ဆော့ဝဲများ
Kaspersky Key အပါအ၀င် ဆော့ဝဲ 12 ခုရဲ့ ကီးကို keys.zip 5.0 MB ထဲတွင် ထည့်ပေးထားပါသည် ။ How to Activate Kaspersky Key
Kaspersky ကီးရယူရန် Download =>> Kaspersky Anti-Virus 2013 key
Zawgyi unicode / Myanmar unicode
Ayar unicode နှင့် Wyzo Browser
ကို တို့ ကိုထည့်ပေးထားသည် ။
ထက် အဆပေါင်းများစွာ မြန်တဲ့ Wyzo Browserကို အသုံးပြုပါ ။ download click here
Archives May (6) April (1) November (1) May (1) February (37) January (11) December (1) August (5) July (3) June (5) May (5) April (2) March (8) February (17) January (26) December (11) November (19) October (30) September (1) August (3)
နတ်သားလေး. Powered by Blogger.
Copyright © 2011. အရူးလေး - All Rights Reserved